Creative Writing » လှပ ပေါ့ပါး လက်ဝတ်လက်စား – Fancy Accessories	40
ဒီမှာတော့ ဘရန်းနာမည်ရှိတဲ့ ဖန်စီ (ကိုယ့်အခေါ်ပေါ့လေ) သာဝတ်ရင် အစစ်တမျှ ပဲ တန်ဖိုးထားကြတယ်။ ကိုယ့်တို့ နိုင်ငံမယ်က ရတနာ မျိုးစုံထွက်တော့ အထင်ကြီးစရာမဟုတ်တဲ့ ခရစ်စတယ် အစစ် မျိုးစုံဟာ အရမ်း တန်ဖိုးထားခံရပါတယ်။”
ခုနောက်ပိုင်းကျ ခဏခဏသတိထားမိလာတာက ဆိုင်တွေမှာ အင်းကျီပုံစံ သာမန်လောက်ကို ဖန်စီဆွဲကြိုးလေးနဲ့ဆွဲပြထားတော့ တော်တော်စမတ်ကျ လှနေတာရယ် …. ကိုယ်ဝယ်မယ်လဲဆို ဖန်စီဖြုတ်ထားလိုက်တော့ အင်းကျီက ငုံးတိတိနဲ့ အဲ့ကစလို့ ဖန်စီပြန်စိတ်ဝင်စားလာတာ …. ဟိုတလောကလဲ ပွဲတခုသွားဖို့ရှိတော့ ဗမာအကျီကိုပဲ လိုပ်တဲ့ဖန်စီဆွဲလိုက်တော့ မရိုးဆန်း အတော်ကျိကောင်းသွားတာ…..
ဟေးဟေးးး အချိန် အားအားယားယားရှိတုန်းကများဆို လယ်သာကြိုး ရောင်စုံ မျှင်မျှင်လေးတွေ ရှာဝယ်ပြီး လည်ပင်းစည်းလိုက်၊ လက်ပတ်လိုက်၊ ရှပ်ကော်လာအောက်မှာ ချည်လိုက်နဲ့ အမျိုးမျိုးလုပ်ဖူးတယ်။
နောက်ပြီး အီဂျစ်တို့ အင်ဒီယားတို့မှာ ခတ်စားတဲ့ ခေါင်းပေါ်တင်တဲ့ ကြိုးလေးတွေ အရမ်းမိုက်တယ်။ ရုပ်ရှင်ထဲမှာ အီဂျစ် ဘုရင်မတွေ ဖက်ရှင်လေ။ ခိခိ။ (ပြီးမှ ပိရမစ်ထဲထည့်မြှုပ်ခံရတာ တစ်ပိုင်းပေါ့) နောက်ပြီး လက်ကောက်နဲ့ လက်စွပ်ကို သံကြိုးတွေနဲ့ သွယ်ထားတာမျိုးတို့
(လက်ကောက် ၂ ခုကို သံကြိုးနဲ့ တွဲတာတော့ မကောင်းဘူးနော်) လက်စွပ်၅ ခုလုံးကို သံကြိုးနဲ့ တွဲထားတာမျိုးတို့ ဆို လက်ရာကောင်းရင် ပွဲ ဝင်တယ်။
ဘယ်လိုပဲ ဖြစ်ဖြစ် ဝတ်တတ်ရင် လှတာပါပဲလေ။ .
pooch says: ပေးလိုက်တဲ့နားဆွဲကြိုက်တယ်မလား
ရလပိုင်းသွားရင် စီချွမ်းတိဘက်ဘက်က ရိုးရာနားဆွဲတွေ ဆွဲကြိုးတွေ လက်ကောက်တွေ တွေ့ရင်ဝယ်ခဲ့ပေးမယ်သိလား Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 12402
ခင်ဇော် says: ကြိုက်လွန်းလို့ ဇွတ်တောင်းထားရတာကို။
Wow says: ငယ်ငယ်ထဲက ဖန်စီလက်ကောက် တစ်သီကြီး နားဆွဲ တွေဘာတွေဝတ်ထားရင် အိမ်ကအဖွားက စွန်း ကျိမရတာ လက်မောင်းပတ် ခေါင်းပတ်နဲ့ လက်ကောက်လက်စွပ်အတွဲလေးတွေ လှလိုက်တာ
ခင်ဇော် says: Dream catcher တော့ စိတ်ကို မလာတာ..
Kaung Kin Pyar says: ဖန်စီပစ္စည်းတွေက အ၀တ်အစားနဲ့ မျက်နှာထားသိပ်ရွေးတာ.. ခိ..။
ဒီမှာတော့ လက်မောင်းပတ်နဲ့ ခေါင်းပေါ်တင်တဲ့ကြိုးလေးတွေမျိုး သိပ်မတွေ့မိဘူး…။ You Tube မှာ ကိုယ့် ဟန်းချိန်းအတိုအစလေးတွေနဲ့ ခေါင်းပေါ်လှအောင်ဆင်လို့ရတာလေးမြင်တော့ စမ်းကြည့်သေးတယ်…၊ စိတ်မရှည်တတ်တဲ့အကျင့်ကြောင့် သူလဲ ခေါင်းပေါ် သိပ်မကြာလိုက်ပါဘူး.. လက်မောင်းပတ်တွေကိုတော့ ရှေးခေတ်ကားတွေ ကြည့်ကြည့်ပြီး သဘောတွေကျတာ….။ (အရင် ၀ိတ်ချလတ်ပါအူးမယ်… ဟိုတစ်ရက်က အွန်လိုင်းရှော့ပင်တစ်ခုမှာ.. တနင်္လာဆိုဘာလက်ပတ်ပတ်၊ အဂါင်္ဆို ဘာပတ်သင့်တယ်နဲ့ နေ့နံအလိုက် ကျောက်တွေ စပ်ပေးထားတာ တွေ့တယ်…၊ Tiger eyes တို့ Rose Quatz တို့နဲ့ နောက်ပိုင်းပေါ်နေတဲ့ ကျောက်တော်တော်များများ ပါတယ်…။
နောက်ပြီး ဘာကျောက်ဆောင်ထားရင် ဘယ်လိုဆိုတဲ့ ယုံကြည်မှုထက်… လှဖို့အတွက်လောက်ပဲ အဓိက ထားဖြစ်တယ်… ဒီပိုစ့်ထဲမှာ ဖန်စီတွေ အမျိုးစုံရော့… ။ ဂျင်းနဲ့ တွဲဝတ်ထားတဲ့ အပြာအကြီးကြီးကလွဲရင် အကုန် လိုချင်တယ်….။ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 12402
ခင်ဇော် says: Feather ကို နားဆွဲရယ် ကျားပါးစပ်လို ကလစ်ကြီးးမျိုးးရယ် လုပ်ဖူးးတယ်.. နောက်မှာ ထိုင်တဲ့ သူငယ်ချင်းးတွေ ဝိုင်းနှုတ်ဆော့တာနဲ့ ပြောင်ရော..
Thint Aye Yeik says: သားကတော့ ဖန်စီဆိုလို့…နားကပ်လေးတစ်မျိုးပဲ….ကြိုက်ပြီး..ကျန်တာ သဘောမကျသလိုဖြစ်နေတာ။
လက်ပတ်တို့ဘာတို့ဆိုရင်.. ရှုပ်ရှက်ခက်နေတာတွေ မကြိုက်ပဲ…ပိုးကြိုး(အနီ/အနက်)သီးသန့်ပဲ… ဝတ်ချင်တာရယ်… ။ .ရွာသားတစ်ယောက်ယောက်က…ယောကျာ်းလေးတွေ အတွက်ထပ် စုပြီး..ဒီလိုပိုစ့်လေးတင်ရင်…ပိုပြည့်စုံသွားပြီ။ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 12402
ခင်ဇော် says: မိန်းးခလေးး ဖက်ရှင် အမြင်မှာတောင် ဂလိုရှိတယ်ဟ…!!
အကုန် ပြုံ မဝတ်ပါနဲ့ လို့ .. 😁😁😁
ဂျစ်စူ says: သတ္ထုဖန်စီမှာ နိုင်းတူးဖိုင်ဆိုတာကို 925 လို့ ပြောင်းရေးပါ အွီးကဇော်
ခင်ဇော် says: အေးးး ဟုတယ်
မြစပဲရိုး says: အင်မတန်တူ ကြောင်း သက်သေပြချင်စမ်းပါဘိ။ :-)))
ခင်ဇော် says: အဟိဟိ..
ဂျက်စပဲရိုး says: fancy ဆိုတာထက် accessories တွေကို ကြိုက်တာ။
(အကောင်းနဲ့ကို မတန်တာပါ ဟီးဟီး) :P :P :P
ခင်ဇော် says: အင်းလေ ပေါ့ပေါ့ပါးပါး ပစ္စည်းများ ဟုတ်ဘူးးလားး
အရင်ကကျော်စွာဦးကြီးမိုက် says: .ပြန်ငယ်ချင်လိုက်ထှာ..ဟီဟိ..ဒါမှ ဖန်စီတွေဝတ်လို့ရမှာ.. Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 12402
ခင်ဇော် says: ခုလည်း ဝတ်လို့ရပါတယ် မိုက်မိုက်ရဲ့။
လုံမလေးမွန်မွန် says: ဖန်စီဆို အရောင်တွေထက် အဖြူကို ပိုကြိုက်တယ်..
နောက် တိုင်းရင်းသားတွေလုပ်တဲ့ handmade တွေကို ပိုကြိုက်တယ်.. ပြီးတော့ recycle တွေ ဝတ်ချင်တယ်.. newspaper နဲ့ လုပ်ထားတာတွေ.. ဒီဇိုင်းဆိုင်ရင်လည်း ရှင်းရှင်းလေးနဲ့ antique ပုံစံလေးတွေ ကြိုက်တယ်.. အခုတော့ ရှိစုမဲ့စု ရွှေလေးတွေ အိမ်ကို အကုန်ပြန်ပေးထားတယ်.. အိမ်ပြန်လို့ အမျိုးတွေနဲ့တွေ့ရင် ရွှေမဝတ်လို့ အမြဲအဆူခံရတယ်.. Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 12402
ခင်ဇော် says: လှအောင် ဝတ်တတ်ရင် အကုန်ကြည့်ကောင်းးတာပဲရယ် 😍😍
CharTooLan says: ပြထားတဲ့ထဲမတော့ အငယ်ကတည်းကလိုဂျင်တာ လက်မောင်းပတ် လက်ကျပ်ခေါ်တာလားမသိ
ဈေးတွေ ကုန်တိုက်တွေပတ်တဲ့အကျင့်မရှိတော့ ရွှေနဲ့လုပ်မှဖစ်မယ်ပဲထင်နေတော့တာ :D
ခင်ဇော် says: ဒီမှာ လည်းး ပွဲဈေးတွေ ရှိတယ်..
manawphyulay says: ဖန်စီတွေ ကြိုက်တော့ ကြိုက်တယ်… မ၀ယ်နိုင်လို့ ၀ယ်ပေးပါလားဟင်…
ခင်ဇော် says: ဝယ်ပေးမယ်
ပျင်းတကာ့ ထိပ်ခေါင်တင် says: သယ်ရင်းတျောက် ဖန်စီနားကပ်လေးပေးတာ ဝတ်ချင်တော့ အားယားပြီး မရှိတဲ့နားပေါက် အသားအနာခံပြီး သွားဖောက်သလေ
ပြီးမှ ဓာတ်မတည့်လို့ ဝတ်မရ၊ နားပေါက်ကလေးနှစ်ပေါက်ပဲ အရှုံးထွက်(အသားမတင်လို့)ကျန်ခဲ့တယ်။ ဖန်စီထဲဆို ခရစ်စတယ်တို့ အရောင်တောက်တောက်/လင်းလင်း ပြောင်ပြောင်ရောင်ရောင်မျိုး မကြိုက်တတ်လှ
ကြိုက်လိုက်ပလား မြင်လိုက်ပလားဆို အရောင်မွဲမွဲ/မှောင်မှောင် လယ်သာတို့ aged metal မျိုးချည့်ဆိုဒေါ့ဂါ လူရုပ်မပေါ် အာ့မျိုးဒေဝတ်တိုင်း လူတကာဝေဖန်ရှုတ်ချမှု ခံပြီးသကာလ ဖန်စီဝတ်မှု/ဝယ်မှုအဝဝကို အကန့်အသတ်မရှိ ရပ်ဆိုင်းပလိုက်တယ်(ပြန်ဝတ်ချင်/ဝယ်ချင်စိတ် မပေါ်မချင်းထိ) Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 12402
ခင်ဇော် says: သားရေကြိုးတွေ ဟိုစည်းဒီစည်းမို့ အဖိုးကပြောဖူးတယ်။
ပျင်းတကာ့ ထိပ်ခေါင်တင် says: အဖိုးဆီက ရွှေခွက်အမွေရရင် ဆွဲပါ့မယ်လို့ ပြောလိုက်ဖူးလား
kai says: ဖန်စီက… အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလန်းသစ်တွေအများကြီးဖေါ်ပေးနိုင်သမို့.. မြန်မာတွေ.. အထူးသဖြင့် မြန်မာအမျိုးသမီးတွေ ကန်င်ပိန်းလုပ်ပြီးကို.. ကြိုက်သင့်..၀တ်သင့်လှတယ်…။
ခင်ဇော် says: ဘရန်း နာမည် နဲ့ ဖန်စီတွေကတော့ နောက် တစ်ဆင့်ပေါ့နော်။
ဂျက်စပဲရိုး says: ကိုယ့်ပေါင် ကိုယ်ပြန်လှန်ထောင်းရရင်ဖြင့်
နောက်ဆုံး ရန်ကုန် ပြည်သူ့ရင်ပြင်ထဲက လက်ဆောင်ပစ္စည်းဆိုင်က သစ်သား နဲ့ လုပ်ထားတဲ့ ဘောပင်လေးတွေ ဝယ်မယ် လုပ်တော့လဲ မှင်ချောင်းက ခလုပ်နှိပ်တိုင်း မထွက်။ ဆိုတော့ကာ ကိုယ့်နိုင်ငံမှာ ဖန်စီ ပစ္စည်း လုပ်ဖို့ ကုန်ကြမ်းကောင်းကောင်းလဲရှိတယ်။ အိုင်ဒီယာ လဲ ရှိတယ်။ လုပ်လဲ လုပ်နိုင်တယ်။ ဝယ်မယ့် ဈေးကွက်လဲ ရှိတယ်။ အာ့ကို အရည်အသွေး ကောင်းကောင်းလေးနဲ့ ဈေးကွက်ကို ထိုးဖောက်နိုင်ရင်ဖြင့်…..
ခင်ဇော် says: ကြုံဖူးတာ အံတိုနေပေါ့။
ဂျက်စပဲရိုး says: မေမြို့က သိုးမွှေးထည်က လွန်ခဲ့သော သုံးနှစ်လောက်က ဝယ်ဖူးတယ် ထင်ပ။
ခင်ဇော် says: ခွီးးးး
ဂျက်စပဲရိုး says: လှည်းတန်းက ညဝတ်အကျီင်္ လို ဝမ်းဆက် ရောင်းတဲ့ ဆိုင်က ချည်သား လည်ဝိုင်းလေးတွေပဲ ဝတ်တယ် ဟီးဟီး
လုံမလေးမွန်မွန် says: ဒီရက်ပိုင်း သတင်းစာ မဂ္ဂဇင်းစက္ကူတွေကို recycle ပြန်သုံးပြီး paper beads တွေလုပ်တာ စိတ်ပါနေတယ်.. မျက်လုံးမကောင်းလို့ ဖဘ မသုံးတာ.. အဲဒါတွေလုပ်မှာ ပိုဆိုးနေသလားမသိ… beads တွေလိပ်တာက အဆင်ပြေပေမယ့်.. polish လုပ်တာတို့.. ဆေးခြယ်တာတို့.. နားကပ်အတွက် ချိတ်တွေ.. ဆွဲကြိုးအတွက် ကြိုးတွေက နီးနီးနားနားမှာ ရှာမရဘူး.. ပိတ်ရက်တော့ ဗိုလ်ချုပ်ဈေးထဲ သွားမွှေမလားလို့.. Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 12402
ခင်ဇော် says: ပေါလစ် အတွက်က လက်သည်းနီ အကြည်ပုလင်းလေး ဝယ်ထားလေ။
လုံမလေးမွန်မွန် says: လက်သည်းနီက အသုံးမခံဘူး… ခဏလေးနဲ့ကုန်တာ.. ဟိ.. စလုံးကအသိကို ပြန်လာရင် ကော်ဘူးတွေ ဝယ်ခဲ့ပေးဖို့ ပြောထားတယ်.. Mod Podge ဆိုလား.. အဲဒါလေးလည်း မိုက်တယ်.. ဈေးတော့ကြီးတယ်.. အရင်းအနှီးက မနည်းဘူး..
kai says: ကုန်ကြမ်းပေါတဲ့… ချိုင်းနားပြည်ကြီးနားကပ်နေတဲ့.. မြန်မာပြည်…။
ခင်ဇော် says: စာဖတ်တာရယ်
kai says: Team လေးဖွဲ့ပြီး.. Made in Singaporeဆိုပြီး ၀က်ဘ်ဆိုက်(ဖဘ)မှာတင်ရောင်းပေါ့…။
အောင် မိုးသူ says: ခရစ်စတယ်တွေကို ကြိုက်တယ်
ခင်ဇော် says: ခရစ်စတယ်က ဒီဇိုင်းလှရင် နီလာတွေ ပတ္တမြားတွေထက် မက်မောစရာ ကောင်းတယ်။